ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့်... | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ရောက်တတ်ရာရာ » ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့်...
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 4:23 PM
Posted by မိုးသက် at 4:23 PM Read more
၀ိဝိ June 20, 2012 at 4:53 PM
၀ိဝိ June 20, 2012 at 4:57 PM
မေမြို့မိုး June 20, 2012 at 4:59 PM
လာခဲ့ပါညီလေး.အစ်ကိုမပြန်သေးရင် မင်းကို နေရာအစုံလိုက်ပို့မယ်..။ .
မဒမ်ကိုး June 20, 2012 at 6:05 PM
Ko Naw(WisdomLife) June 20, 2012 at 7:52 PM
ဘလော့ဂါကြီးတွေ ဘယ်ဟာမှ အလွတ်မပေးပါလား ဟရို့.....
Candy June 20, 2012 at 10:42 PM
မုန့်လုံးရေပေါ်ကြီး ပြန်ပေါ်လာပြီ ဟီးဟီး
စာမွဲရှိတာကို သူရေးလိုက်မှ ငါ့မှာ တော်တော်တွေးလိုက်ရတယ် >.<
phyu ei June 21, 2012 at 1:41 AM
ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် သမီးက ပါလာသေးတယ်လား xD
စံပယ်ချို June 21, 2012 at 2:28 AM
အရမ်းလှတဲ့ မော်စကိုမြစ်ကြီး ကိုကြည့်ခဲ့ရလို့
ဖြိုးဇာနည် June 21, 2012 at 10:25 AM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! June 24, 2012 at 12:15 AM
သူများတွေ လည်တာပတ်တာ တွေ့ရင် မနာလိုထှာနော်.. ကိုယ်မှ မသွားနိုင်တာလို့...:)))
အလွမ်းခရီးသည် June 24, 2012 at 8:30 PM
မေ့မောင်လေး ပျောက်နေတာကိုတော့ လွမ်းနေမိသားပဲ။
အခုတော့ နားရက်လေးမှာ ပျော်ရွှင်စွာ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူပေါ့။